5 यूरोप का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक आश्चर्य | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप >5यूरोप का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक आश्चर्य
युरोपको प्रकृति र परिदृश्यहरूले परी कथाहरूको प्रेरणा दिन्छ. विशाल भूमि अद्भुत घर हो पैदल यात्रा ट्रेल्स जसले विश्वको सबैभन्दा धेरै असाधारण चमत्कारहरूतर्फ डो .्याउँछ. हंगेरीमा उल्लेखनीय गुफाहरू, फ्रान्स मा नीलो पानी संग एक ग्रान्ड घाटी, अस्ट्रियामा बरफ महलहरू, र इटालीमा पिरामिड आकारको पहाड, हो5युरोप को सबै भन्दा राम्रो प्राकृतिक चमत्कार.
प्रकृतिका यी आश्चर्यकामहरूले तपाईंको सास टाढा लैजानेछ, र युरोपमा सब भन्दा राम्रो छुट्टीको लागि आश्चर्यजनक दृश्यहरू प्रदान गर्नुहोस्. चाहे तपाईं पैदल यात्रामा वा केबल कार लिनको लागि उत्सुक हुनुहुन्छ, यी5चमत्कारहरू कुनै पनिमा केवल भ्रमण गर्नुपर्दछ युरोपको यात्रा, जीवनमा कम्तिमा एक पटक.
1. यूरोप का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक आश्चर्य: Eisriesenwelt, अस्ट्रिया
तपाईं साउजबर्ग सम्झन सक्नुहुन्छ साउन्ड्स अफ म्युजिकबाट र भोन ट्र्याप बच्चाहरू पहाडहरूमा गाउँदै. तर, होचकोगल पहाड मुनि, युरोपको सबैभन्दा ठूलो गुफा लुकाउँछ. Eisriesnwelt आइस गुफा अस्ट्रिया मा युरोप को सबै भन्दा पेचीहा प्राकृतिक आश्चर्य को एक हो. सबैभन्दा माथि, यस 3000o वर्ग मीटरमा हाइलाइट हिउँ दरबार छ, आइस्पालास्ट.
यो प्राकृतिक घटना संसारको सबैभन्दा ठूलो आइस गुफा हो, र यो लाभा वा जमिन मुनि ढुime्गाको मुनि आइस गठन द्वारा सिर्जना गरिएको थियो.
म कसरी आइस््रिस्वेल्ल्ट आइस गुफामा पुग्न सक्छु?
चाखलाग्दो यो this०km गुफा साल्जबर्गबाट ​​टाढाको ट्रेन सवारी हो, र रेल हरेक घण्टा छोड्छ. Wphaen बाट थप, त्यहाँ एक 15 मिनेट 'minibus गुफामा सवारी. यसबाहेक, धेरै पर्यटक जर्मनीमा, यो प्राकृतिक आश्चर्य पत्ता लगाउन सकेन, त्यसोभए तपाईं एक विशेष अन्वेषक हुन सक्नुहुन्छ. तपाईं 4-घण्टा वृद्धि गर्न सक्नुहुन्थ्यो वा3केबल कार सवारीको साथ घण्टा 'शांत यात्रा.
2. यूरोप का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक आश्चर्य: भर्डन घाटी, फ्रान्स
फ्रान्सको ग्रान्ड क्यान्यन प्रोभेन्सको दक्षिणी क्षेत्रमा फैलिएको छ. ठाडो चट्टान र चूनढुंगा, अविश्वसनीय सुन्दर तालको पानीको लागि एक शानदार पृष्ठभूमि बनाउनुहोस्. त्यसैले, यो प्राकृतिक आश्चर्यको अनौंठो नाम "Gorges du Verdon" को अर्थ हरियोको गोर्जेस हो, फ्रान्सेलीमा.
This amazing lake in Provence is perfect for summer swimming and chilling, साथ ही एक पैदल यात्रा स्वर्ग. छन् 1500 माथिकाबाट यस यूरोपीय आश्चर्यको प्रशंसा गर्न चाहने उत्साहित पर्वतारोहीहरूको लागि ट्रेल्स. त्यसैले, तपाईं छनौट यदि तपाईं केवल सूर्यमा नुहाउन चाहन्छु डु on्गामा, वा खुट्टामा पत्ता लगाउनुहोस्.
म कसरी गार्जेस डु भर्डन जान सक्छु?
निकटतम शहर माउस्टियर्स-सेन्टे-मैरी हो, र तपाईं त्यहाँ पेरिसबाट ट्रेनमा पुग्न सक्नुहुन्छ. त्यसपछि पूल पन्ट डु गलेट्समा प्रवेशद्वारतिर जानुहोस्, यो प्राकृतिक आश्चर्य प्रविष्ट गर्न.
3. यूरोप का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक आश्चर्य: Matterhorn, इटाली
उत्तरी इटालीमा मोन्टे सर्विनो हो 4,478 समुद्र स्तर माथि मीटर. साथै, Matterhorn यसको लगभग उत्तम पिरामिड आकार को लागी प्रसिद्ध छ. अफ्रिकी र युरोपेली मुलुकहरू एकअर्कामा सजीलो रूपमा कुटपिट गर्दा म्याटरहोर्न प्राकृतिक रूपमा सिर्जना गरिएको थियो. यस भूमि आन्दोलनको परिणाम स्वरूप, भव्य चट्टान शीर्ष मा आफ्नो बाटो फेला पर्यो.
यदि तपाई म्याटरहोर्नमा एउटा अविस्मरणीय अनुभव खोज्दै हुनुहुन्छ भने, त्यसो भए पहाडको आधारमा इग्लो गाउँमा बस्नुहोस्. बरफ र हिउँ इग्लोले यात्रुहरूलाई अविस्मरणीय रातको लागि समायोजन गर्दछ. यदि तपाइँ चिसोदेखि डराउनुहुन्छ, बार द्वारा एक पेय तपाईं न्यानो रहन्छ जब तपाईं तारांकित रातमा सुन्दर पहाडको प्रशंसा गर्नुहुन्छ.
म्याटरहोर्नमा कसरी पुग्न सक्छु?
यो प्राकृतिक आश्चर्य तपाईको आश्चर्यजनक यात्राको शुरुवात बिन्दु मात्र हो. तपाईं Matterhorn हिमनदी बाट यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ रेल यात्रा Zermatt बाट. युरोप मा उच्च ट्रेन स्टेशन मा, तपाईं इटालीको ºº०º पानोरामिकको प्रशंसा गर्न सक्नुहुन्छ, स्विट्जरल्याण्ड, र फ्रान्स. यसको मतलब तपाइँ वसन्तमा कुनै पनि कोणबाट उत्तम चित्र प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, गर्मी, वा जाडोमा हिउँले ढाकिएको.
4. Aggtelek गुफाहरू, हंगेरी
Aggtelek गुफाहरू यूरोप मा एक अद्भुत प्राकृतिक आश्चर्य हो. यो असामान्य नामको अर्थ "टपकने पानी" हो जो ढु the्गामा पस्ने पानीको प्राकृतिक प्रक्रियाबाट हुन्छ. फलस्वरूप, Aggtelek मा शानदार गुफामा सुन्दर आकार को लागी स्रोत राष्ट्रिय निकुञ्ज.
बाराडला डोमिका गुफा हंगेरी र स्लोभाकियाको बीचमा २-किलोमिटर लामो ड्रिपस्टोन गुफा प्रणाली हो. यो पनि एक हो यूनेस्को विश्व सम्पदा साइट.
म कसरी बाराडला डोमिकिका गुफामा जान सक्छु?
Aggtelek गुफाहरू 4-घण्टा हो रेल यात्रा परिवर्तन संग बुडापेस्ट बाट. त्यसैले, यदी तिमी एक दिन यात्रा को योजना बनाउँदै बुडापेस्ट बाट, यो केहि तंग हुन सक्छ.
5. यूरोप का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक आश्चर्य: काला वन, जर्मनी
यसको रहस्यमय र घने रूखहरूको लागि प्रसिद्ध, को जर्मनीमा कालो वन युरोप को एक आकर्षक प्राकृतिक आश्चर्य हो. बडेन-रर्टमबर्गमा यस शानदार पर्वत श्रृंखला धेरै पौराणिक कथालाई उत्प्रेरित गर्दछ, ग्रिमका कथाहरू जस्तै. यो जहाँ तपाईं Baden-Baden स्पा शहर बाट बाहिर हिंड्नु हो, र कथा र कोकिल को एक जादू को वन मा.
यदि तपाइँ एक साहसिक मा रुचि राख्नु हुन्छ, ट्राइबर्ग जलप्रवाह, वनको पैदल यात्राको प्रतीक्षा गर्दै. जर्मनीमा यस शानदार प्राकृतिक आश्चर्यको अन्वेषण गर्ने अर्को उत्तम तरिका एक गाईडको साथ पैदल यात्रा गर्नु हो किनभने अन्तिम चीज तपाईले चाहानु भएको भारी बोक्ने जमिनहरूमा हराउँदैछ।.
निश्कर्षमा, यी5युरोपको सबै भन्दा उत्तम प्राकृतिक चमत्कारहरू संसारका सबै भन्दा ठूला रहस्यहरू हुन्. त्यसैले, तपाई निश्चित रूपमा युरोपलाई टुरिस्टले जस्तै अन्वेषण गर्न सक्नुहुनेछ र लोकप्रिय गर्नुहोस् दर्शनीय मार्ग, वा तपाईं युरोपको सबैभन्दा सुन्दर र रोमाञ्चकारी परिदृश्यहरू पत्ता लगाउन र हेर्न सक्नुहुनेछ. सबैभन्दा, महत्त्वपूर्ण, यी सबै प्राकृतिक चमत्कारहरू रेल र यातायातका अन्य माध्यमहरू द्वारा पहुँचयोग्य छन्, यूरोप मा केन्द्रीय शहरहरु बाट.
यहाँ मा एक ट्रेन सेव, we will be happy to help you find how to get by train to any of these natural wonders.
के तपाइँ हाम्रो ब्ल्ग पोष्ट ईम्बेड गर्न चाहानुहुन्छ "युरोपको Best उत्तम प्राकृतिक आश्चर्य" तपाईको साइटमा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://embed.ly/code?URL =Https://www.saveatrain.com/blog/best-n Natural-wonders-europe/ اور- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
naturalwonder naturalwonders naturalwonderseurope रेल यात्रा traintravelaustria traintravelfrance traintravelgermany